Marriott Resorts ee Mexico waxay ku dhawaaqeysaa Agaasimaha cusub ee Iibka iyo Suuqgeynta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mexico » Marriott Resorts ee Mexico waxay ku dhawaaqeysaa Agaasimaha cusub ee Iibka iyo Suuqgeynta
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Mexico • News • Dadka • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Aruurinta Marriott Cancun, oo ka kooban JW Marriott Cancun Resort & Spa iyo Marriott Cancun Resort, ayaa ku dhawaaqday magacaabista Glaucia Canil si ay ugu adeegto Agaasimaha Iibka iyo Suuqgeynta.
Doorkeeda cusub, Canil ayaa mas'uul ka noqon doonta hogaaminta dadaallada iibka iyo suuqgeynta.
Waxay sidoo kale horumarin doontaa istiraatiijiyado kobcinta dakhliga waxayna la shaqeyn doontaa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha.
Ujeeddadu waxay noqon doontaa in la hubiyo farriinta joogtada ah ee warbaahinta iyo istiraatiijiyadda isgaarsiinta bulshada.
Xubin muddo dheer ka mid ah qoyska caanka ah ee Marriott, magacaabista Canil waxay u horseedaa shaqadeeda meeris buuxa, iyada oo ka bilaabatay maamule ka ah JW Marriott Cancun Resort & Spa's salka, Club 91.
Seddex sano ka dib, waxay qaadatay martigelinteeda iyo qaabkeeda ganacsi ee gurigeeda dalka Baraasiil, Halkaas oo loogu magacaabay Maamulaha Iibka ee Renaissance Sao Paulo. Sannadihii ay jirtay oo dhan, Canil waxay qabatay jagooyin kala duwan oo iib ah iyada oo ku guuleysatay natiijooyin muuqda iyo abaalmarinno ay ka mid yihiin Abaalmarinta Madaxweynaha iyo Abaalmarinta Guddoomiyaha.
Muddo dheer ma aysan ahayn Cancun loo yaqaan Canil back, markii ay aqbashay jagada Maamulaha Iibka ee Marriott Cancun Collection sanadkii 2016. Ballanqaadkeedii guusha kooxdeeda iyo meelaha loo dalxiis tago, adkeysigeeda, iyo sidoo kale xirfadaha hoggaamineed ee adag, waxay ku kasbatay dallacsiintii ugu dambeysay ee Agaasimaha Iibinta iyo Suuqgeynta goobaha walaasha.
Marka aysan shaqeynin, Canil waxaa laga heli karaa iyada oo qorraxda hoosteeda ku raaxeysaneysa, iyadoo ku raaxeysaneysa xeebaha Cancun ninkeeda iyo gabadheeda 11 jirka ah.